စစ်သူပုန်အုပ်စုကို မကြာမီ အဆုံးသတ်ပေးကြဖို့ ပြင်သစ်က အစပြုလာခဲ့ပြီလား(စစ်ရေး) – Shwe Thadin
30.6.2021 ရက်နေမှာတော့ မြန်မာစစ်သူပုန်လုပ်ရပ်တွေကို ရသည့်နည်းလမ်းနဲ့ ရပ်တန့်ပြစ်ကြဖို့ NUG အစိုးရ Drဆာဆာ မြန်မာအထူးရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့နှင့် ပြင်သစ်အထက်လွတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာ ကွယ်ရေးနှင့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့သည် ပြင်သစ်ပါလီမန်နှင့် လက်နက်ကိုင်ကာကွယ်ရေး ကော်မတီတွင်…
ပူပေါင်းလို့ ဆွေးနွေးသွားကြတော့မည်တဲ့ ပြစ်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လွှတ်တော် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနှင့် မြန်မာအစိုးရ(NUG)သာမကပဲ ထူး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရော ပါနေတာကတော့ ဘာအရေးလည်း ဘာလုပ်ကြတော့မှာလည်းဆိုတာ ရိပ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်က UNရဲ့ မြန်မာပြည်အတွက်…
အထူးကိုယ်စားလှယ်ရှာရနာဘာဂနာဟာ US ရဲ့မြန်မာအရေးကို ဘိုင်ဒန်ကိုတင်ပြလို့ ကွန်ထိုးပေးနိုင်တဲ့ ဒုဝန်ကြီးတို့ဟာ တွေ့ဆုံပြီး UN မြန်မာအထူးကိုယ်စား လှယ်က မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သွားနေမှု ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ကို တောင်းဆိုတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါသည်….
(US ဒုဝန်ကြီးဆိုသူဟာ ဘိုင်ဒန်ကို မြန်မာစစ်သူပုန်တွေကို ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ လက်နက်တင်သွင်းဖို့ဆိုင်းငံ့ဖို့အရေးတွေကို ပြုလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းအကြံပေးခဲ့သူဟု သိရပါသည်)ဘိုင်ဒန်ကလည်း ပူတင်နဲ့တွေ့စဉ်က ကမ္ဘာကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်သူကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ချမှတ်ထားသည့် ဥပဒေတွေကို
ချိုးဖောက်သည့်နိုင်ငံ မည်သူ့ကိုမဆို ထိရောက်တဲ့လက် တုံ့ပြန်မှုသူ့ကတော့ ပြုလုပ်မယ် ပြောထားပြီးသားပါ USကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးကလည်း မြန်မာစစ်တပ် နောက်ကြောင်းအမြန်ပြန်လှည့်ပါလို့ အာရှဒေသ အ စည်းအဝေးပွဲမှာ ပြောထားလိုက်ပြီးပါပြီ…
အဲ့တော့…..စစ်မတို က် ဖူးလို့ပြောထားသည့် US မြန်မာ့စစ်သူပုန်ပြုတ်ကျရေးကို ကူညီမှုဘယ်လို ပေးမလည်း US သူတေသီရဲ့ သုံးသပ်ထားမှုကတော့ US အနေနဲ့ လေကြောင်းက ပစ်ကူတိုက်ခိုက်ရင်ကုန်ကြစရိတ်လည်း သက်သာမယ် တရုတ်ကလည်း တုံ့ပြန်မှု လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ သုံသပ်ထားပါသည်..
UK နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလည်း ကမ္ဘောဒီးယား ဗီယန်နန် စင်္ကာပူ နိုင်ငံတို့ကို ရောက်ရှိလာစဉ်ကမြန်မာ့ ပဋိ ပက္ခ ဖြစ်နေမှုများကို ဦးစားပေးဆွေးနွေးသွားခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့လိုလာနေကြသည့် ဒီမိုကရေစီအရေး အမြန်ဆုံးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ဖို့ ကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်…
ကိုရီးယား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကမြန်မာမှာ ဒီမိုကရေစီ အမြန်ဖော်ဆောင်ဖို့ပြောထားပြီးသလို ဂျပန်ကလည်း ပြောထားပြီးသားပါ သြဇီအစိုးရ စစ်သူပုန်ကို အရေး ယူဖို့ဖိအားပေးခြင်းခံနေရသလို ဘင်္ဂလာဒေ့စ်လွှတ် တော်ကလည်း သူ့အစိုးရကိုဖိအားပေး တောင်းဆိုထားပါသည် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ နိုင်ငံတကာက…
စစ်သူပုန်ကို စာထုတ်ကန့်ကွက် တောင်းဆိုနေမှုတွေ သည် စစ်သူပုန်အုပ်စုကို လည်ပင်းစွပ်ဖို့ ခိုင်မာသည့် ကြိုးတချောင်းအဖြစ်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ အာဆီယံအစည်းအဝေးရဲ့ သဘောတူချမှတ်ခဲ့တဲ့အချက်(၅) ချက်ကို စစ်သူပုန်လိုက်နာဖို့နဲ့….ဒေသတွင်နိုင်ငံတွေကလည်း အမြန်ဆုံး ဖိအားပေးကြဖို့ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့….
နိုင်ငံကြီးများက တိုက်တွန်း တောင်းဆိုထားပြီးပြီ ဒါတွေကို စစ်သူပုန်အုပ်စုကလိုက်နာမှုမရှိဘူးဆိုလျှင်တော့ UN ကနေNUG အစိုးရကို တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ရှိလာပြီး NUG အစိုးရအနေနဲ့လည်း စစ်တပ်က ပြည်သူကိုကာကွယ်ရမယ့်အစား ပြည်သူ့အာဏာလုယူလို့ပြည်သူ…
အကြမ်းဖက် သ တ်ဖြ တ်နေမှုတို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေပြဌာန်းချက်ပါအတိုင်း ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်နိုင်ငံတကာကို ထိန်းသိမ်းကူညီ သုတ်သင်ပေးဖို့ အကူ အညီ တောင်းခံခွင့်လည်း ရှိထားတယ်ဆိုတော့ဘယ် တော့ အစပြုမလဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကလည်းအစပြုလာပြီ စစ်သူပုန်အာဏာလုသွားလို့…
စီပွားရေးကလည်း တဟုန်ထိုး ကျဆင်းသွားပြီ စစ်သူပုန်ရဲ့အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီး ပစ်ခက်လူသတ်လုပ်ရပ်တွေကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအများအပြားဖြစ်လာပြီး အငတ်ဘေး ဒုက္ခဘေး ကြုံတွေ့နေရသူတွေလဲတနေ့ထပ်တနေ့ တိုးပွားနေတာကို ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာကအမြန်ဆုံး ထိန်းသိမ်းနိုင်မှ…
ဖြစ်တော့မှာကိုလည်း သိသွားကြကုန်ပြီး NUG အစိုးရအနေနှင့်လည်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားကို သင် တန်းပေးဆင်းထားပြီးပြီတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေကလည်း တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေကြတာ နေစဉ်နဲ့အမျှဆိုတော့ စာထုတ်ဖိအားပေး ပိတ်ဆို့မှုတွေလောက်နဲ့ နောက်မဆုတ်တဲ့ စစ်သူပုန်အုပ်စုကို သုတ်သင်…
ဇာတ်သိမ်းမှသာ မြန်မာပြည်အရေး တည်ငြိမ်သွားတော့မယ် အခြေအနေကို လက်ခံသွားကြပြီဖြစ်လို့ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများကပဲ အလျှင်စလို လုပ်ကြမလား မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းအတူရပ်တည်လို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်တင်ပေးကြဖို့ အဖက်ဖက်က ကူညီထောက်ပံ့…
လုပ်ဆောင်ပေးနေကြတဲ့ နိုင်ငံများနဲ့ NUG အစိုးရတို့ ပူးပေါင်းလို့ ဇာတ်သိမ်းပေးကြမလား ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး ပြောလိုက်တဲ့ စကားနဲ့ပဲ ထက်ပြောပြရရင်တော့ ပြည်သူများနဲ့ပြည်နယ်များက တပ်မတော်သားများ မျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့ စစ်သူပုန်အုပ်စုကို ဇာတ်သိမ်းပေးကြမယ့် D Day ဆိုတာဟာ မကြာမီ ဖြစ်လာပါတော့မည်ဟု သုံးသပ်လိုက်ပါရစေ…